बेवारिसे शव दाहसंकार गर्ने को हुन् विनयजंग ? जसको जीवनीले सबैलाई प्रेरणा दिन्छ ! — Motivate News
Posted on June 24, 2018 by Ghanshyam Shrestha
काठमाडौँ – कुनै पनि मानिस स्वभावैले आफ्नै मनलाई छुने कुनै समस्या परेपछि अरुको पीडालाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् सोसल चेन्ज नामक संस्थाका संस्थापक विनयजंग बस्नेतले । आफूलाई जिन्दगीले धेरै कुरामा पाठ सिकाएर यो ठाउँसम्म आइपुगेको उनी सगर्व उल्लेख गर्दछन् ।
विनयजंगले कलिलै उमेरमा आमाको काख गुमाउनु परेको थियो भने बुबा पनि गाडी दुर्घटनामा परेर बितेपछि उनको जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको थियो । उनले जसोतसो आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेकै थिए । आखिर आमाबाबु सँधैभरि कस्को चाँहि बाँच्छन् र ? जीवनकायस्तै आरोह अबरोहका बीचमा नै उनकी जीवन संगिनीले पनिउ नलाई छाडेर गएपछि त झन् जीवनको कठिन परीक्षाको घडी आयो । समय परिस्थितिले उनलाई एक्लो बनाए पनि उनले आफ्नो मनलाई कहिल्यै एक्लो हुन दिएनन् ।
हाम्रो समाजमा चलेको उक्ति छ नि मानिसले जीवनमा सबैथोक खानु तर हरेश नखानु । यसलाई विनयजंगले मनन गरे र अगाडि बढेरै देखाए । उनको समाजमा केही गरेरै देखाउने अठोट आजझन् अग्र गतिमा अगाडि बढिरहेकै छ ।
विनयजंगलाईआफू सुखी सम्पन्न र शिक्षित परिवारमा जन्मिए पनि समयले एक्लो र बेवारिस जस्तो बनाइदिएका थियो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उच्चतहमा काम गरेर समाज देशलाईअमूल्य योगदान दिएका उनका बुबा साथीको घरबाट फर्कदैं गर्दा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि प्रहरीले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा शव बुझाएको रहेछ ।
यता बुबा किन घर फर्केनन् भनेर उनको परिवार, आफन्त र छिमेकीले सारा खोज खबर गरे । जब बाबुको मृत्यु भएर अस्पताल लगेको भन्ने थाहा पाएर उनी शव हेर्न शिक्षण अस्पताल गए । त्यहाँ शव थिएन । प्रहरीले कोहीआफन्त पत्ता नलागेको भनेर बुबाको शव वेवारिसे लाशहरुका राख्ने स्थानमा राखेको रहेछ । यस्तो अवस्था देखेपछि उनको दिमाग हल्लियो आखिर जीवन भन्नु केही रहेनछ भनेर । जो कोही मान्छे, चाहे जति सुकै सम्पन्न भएपनि एक दिन बित्नेछ । यत्रो सम्पन्न र परिचित मान्छेको त यस प्रकारको मृत्यु हुँदो रहेछ भने आखिर जीवन भनेको केही होइन् । अबको उनको जीवनले नयाँ मोडलियो । यस्ता बेवारिस भएका शवहरुको सदगद् गरेर आफू लाए त्यस्ताहरुको उद्धारमा लाग्ने अठोट गरेर काम सुरु गरे जुन काम अद्यापि जारी छ । आफ्नो घरखेत बेचेर उनले अस्पतालहरुमा भएको बेवारिसे लाश जलाउने काम विगत आधादशक देखि गरिरहेकै छन् । यही समयदेखि उनले स्थापना एक्सन फर सोसल चेन्ज नामको संस्था चलाएका छन् । संस्थाको प्रमुख उद्देश्य थियो कोही पनि मान्छे बेवारिसे भएर बित्नु नपरोस भन्ने ।
समयको अन्तरालमाआजसम्म आइ पुग्दा उनले सडक, मठ, मन्दिर र अस्पतालमा भेटिएका ९६ वटा लासहरुको सदगद्गरिसकेका छन् । सामान्यतया एउटा लासको सदगद् गर्न लगभग ११हजार बढी खर्च लाग्ने गर्छ । यद्यपि आम्दानीको स्रोत कोही छैन । बरु भएको जग्गा बेचेर भए पनि यी लासहरुको सदगद गरिरहेको बताउँछन् उनी । आफूले चढ्दै आएको मोटरसाईकल धरौटीमा राखेर उनले धेरैजनाको सद्गद् गरिसकेका छन् ।आफूले यस्तो सामाजिक काम गर्दा समेत धेरैले असहयोग गर्ने गरेको अनुभव उनीसँग धेरै छ ।
आखिर समाजमा धेरैथरिका मान्छे हुन्छन् भन्ने विनयजंग बस्नेतलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनको यस्तो काम थाहा पाएर नेपालका धेरै पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरुले राम्रै चर्चासमेत गरिसकेका छन् भने केही विदेशी मिडियाहरुले समेत राम्रै कभरेज गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेकाप्रायः सबै अस्पतालले विनयजंग बस्नेतलाई चिन्छन् । बेवारिसे शवको बारेमा जानकारी दिन्छन् भने झन् काठमाडौंका प्रहरी कार्यालयहरुमा त उनी धेरै नै परिचित छन् । बेवारिसे शवहरुको दाहसंस्कार गर्ने काम विनयजंगले गर्छन् भन्ने अधिकाँशलाई थाहा छ । उनीहरु बेवारिसे लाश प्राप्त हुन साथ उनलाई खबर गरिहाल्छन् ।
उनले गरेको यस्तो उदाहरणीय कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै नेपाल सरकारले विशेष सम्मान गर्ने भनेर आफुले जानकारी पाएको उनले बताएका छन् । सलाम छ यस्ता नेपाली सपूतलाई ।
काठमाडौं – दक्षिण अफ्रिकाका राजनेता, प्रथम अश्वेत जननिर्वाचित राष्ट्रपति, तथा अथक परिश्रमी नेल्सन मण्डेलाको जीवनी निकै प्रेरणादायी छ | मण्डेलाको जीवनीलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक मुलुकका कर्मठ नागरिकले देश र जनताका लागि आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुपर्छ, समाजमा देखिएका सबै किसिमका भेदभाव...
1] जब कसैले तपाईको copy गर्छ, भने सम्झिनुस् तपाई Success हुदै हुनुहुन्छ । 2] कमाउनुस्…कमाउदै रहनुस् तब सम्म कमाउनुस् जब सम्म मंहन्गो सामान पनि सस्तो लाग्दैन । 3] जुन व्यक्तीले लोभ गर्न छोड्छ ,उसको प्रसंसा पनी सकीन्छ । 4] यदि तपाईको “plan...
काठमाडौँ – जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न कसै न कसैको साथ र सहयोगको आबस्यकता पर्दछ । अंझ सफलताका लागि श्रीमतिको सहयोग महत्वपुर्ण हुन्छ । अशल श्रीमतिले श्रीमानको संधै भलो सोच्छन् र जीवनमा प्रेरणा दिइरहन्छन । एक दिन नाथेनायल हार्थन निराश हुदै घर आएर...
काठमाडौँ – एसियाकै सबैभन्दा धनि ब्यक्ति हुन चिनियाँ नागरिक ज्याक मा । उनी विश्वकै चर्चित सपिङ साइट अलिबाबाका संचालक हुन । उनको अनुमानित सम्पति २३ बिलियन डलर पुगेको ब्लूमबर्गको इण्डेक्सले देखाएको छ । उनले छोटो समयमा यति धेरै सम्पति थुपारेकी आफूभन्दा धेरै गुणा...